ပရီးမီးယားလိဂျအသငျးတှေ ဝိုငျးလုကွဦးမယျ့ ခနျြပီယံရှဈကစားသမား ၅ ဦး – Sports A2Z
ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက အင်ျဂလနျရဲ့ ဒုတိယအဆငျ့ပွိုငျပှဲဖွဈတဲ့ ခနျြပီယံရှဈမှာ ခွစှေမျးပွခဲ့သူတှကေို ပရီးမီးယားလိဂျအသငျးတှကေ ထငျပျေါလို့ စငျတျောကောကျတတျကွတာ အစဉျအလာပဲဖွဈပွီး ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီမှာ ဝပျကငျးဈ၊ ဘငျရာမာတို့လို ကစားသမားတှကေို အခှငျ့အရေး ပေးခဲ့ကွသလို ဒီရာသီမှာရော ဘယျကစားသမားတှေ အခှငျ့အရေးရလာမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။
၁။ အီမီလီယာနို ဘှငျဒီယာ (နော့ဝဈချြစီးတီး)
ဘှငျဒီယာကတော့ နော့ဝဈချြနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ တဈရာသီ ကစားဖူးသူဖွဈပွီး မနှဈက တနျးဆငျးသှားတုနျးမှာလညျး အသငျးကွီး တခြို့က ကနရေီတှရေငျခှငျထဲကနေ ဆှဲထုတျဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ မအောငျမွငျခဲ့တာပါ။ ဒီရာသီမှာ ခနျြပီယံရှဈမှာ ၃၉ ပှဲ ကစားထားပွီး ဂိုးပါဝငျ အကြိုးပွုမှု ၃၁ ကွိမျရှိခဲ့သလို သှငျးဂိုးက ၁၅ ဂိုးနဲ့ ဖနျတီးမှု ၁၆ ကွိမျဆိုတာက အလယျအလတျအသငျးတှအေတှကျ လုံလောကျပွီး အသငျးကွီး စာရငျးဝငျ အာဆငျနယျကပါ ချေါယူလိုနတောဖွဈပါတယျ။
၂။ မိုကျကယျ အိုလိဈ (ရကျဒငျး)
မိုကျကယျ အိုလိဈကတော့ ခနျြပီယံရှဈကစားသမားတှထေဲမှာ စောငျ့ကွညျ့အခံရဆုံးသူတဈဦးဖွဈပွီး အသကျ ၁၉ နှဈအရှယျသာရှိသေးတဲ့ အင်ျဂလိပျလူငယျဟာလညျး ဘှနျဒီယာနဲ့ စှမျးဆောငျရညျခငျြး နီးစပျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ၇ ဂိုးသှငျးပွီး ၁၂ ဂိုး ဖနျတီးပေးခဲ့တဲ့ ဘယျသနျကှငျးလယျလူဟာ အလယျတနျးမှာ ဗဟိုရော တောငျပံမှာပါ နရောစုံ အသုံးပွုနိုငျသူဖွဈပွီး ခြဲလျဆီးနဲ့ မနျစီးတီး အကယျဒမီတှမှော သငျယူဖူးသူလညျးဖွဈပါတယျ။ အခုတော့ သူ့ကို ခြဲလျဆီး၊ အာဆငျနယျ၊ လီဗာပူးလျနဲ့ လိဒျဈတို့က စောငျ့ကွညျ့နပွေီး ပွငျသဈကလပျ လိုငျလီကလညျး အလိုရှိနတောပါ။
Ismaïla Sarr in the Championship this season [Watford rank]:
145 attempted take-ons [1st]
73 successful take-ons [1st]
86 total shots [1st]
57 penalty area shots [1st]
43 chances created [2nd]
7 match-winning goals [1st]
Playedakey part in their promotion campaign. 🔑 pic.twitter.com/k5zxds5QKo
၃။ အစ်စမိုငျလာ ဆားရျ (ဝတျဖို့ဒျ)
ဆီနီဂေါတောငျပံသမားဟာ ရညျမှနျးခကျြကွီးကွီးနဲ့ သူ့ရှကေ့ ရဈခြာလဈဆနျလို ဖွဈလာမလားဆိုပွီး လီဂူးဝမျးကလပျ ရငျးနေးကနေ ရောကျလာခဲ့ပမေယျ့ မှနျးခကျြနဲ့ နှမျးထှကျ မကိုကျခဲ့ဘဲ အသငျးရဲ့ ဆိုးရှားတဲ့ ကစားပုံမှာ တနျးဆငျးခဲ့ရသူဖွဈပါတယျ။ ခနျြပီယံရှဈမှာ တဈနှဈကစားပွီး ပွနျလညျတနျးတကျလာခြိနျမှာ မွငျ့မားတဲ့ တိုကျစဈစှမျးဆောငျရညျကို ပွသခဲ့ပွီး နကယျြကောငျတှရေဲ့ ကလပျစံခြိနျတငျ ပွောငျးရှကွေ့ေးရှငျအနနေဲ့ လီဗာပူးလျ၊ အာဆငျနယျနဲ့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျတှရေဲ့ စိတျဝငျစားမှုကို အသုံးခနြိုငျမလား စောငျ့ကွညျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။
၄။ ဟာရီ ဝီလျဆနျ ( ကာဒဈဖျ)
လီဗာပူးလျကနေ ဘုနျးမောကျကို အငှားသှားကစားပွီး ခွစှေမျးပွခဲ့တုနျးက သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝကတော့ တဈဆငျ့မွငျ့တကျတော့မယျလို့ လူတှကေ ခနျ့မှနျးခဲ့ကွပမေယျ့ အသငျးကွီးမှာ နရောမရခဲ့ဘဲ လိဂျခနျြပီယံရှဈကိုပါ သှားခဲ့ရခြိနျမှာ သူ့ရဲ့ ခွစှေမျးပွရာအသငျးကတော့ ဝေးလျဈကလပျ ကာဒဈဖျဖွဈခဲ့တာပါ။ ရကျဒငျးရဲ့ မိုကျကယျ အိုလိဈနောကျမှာ ဖနျတီးမှုတဈကွိမျသာ နောကျကနျြခဲ့တဲ့ ဝလေသားဟာ သှငျးဂိုး ၇ ဂိုးမှာ ဟကျထရဈ တဈကွိမျလညျး ရယူနိုငျခဲ့ပွီး ဒီရာသီမှာတော့ ဘယျပရီးမီးယားလိဂျအသငျးလတျကို ရောကျမလဲ စောငျ့ကွညျ့ရပါလိမျ့မယျ။
📈 Most prolific Englishmen (#PL +C'ship; fr. 19/20; inc. P/Os):
44⚽️: 🔵⚪️ADAM ARMSTRONG🔵⚪️
41⚽️: Harry Kane
40⚽️: Ollie Watkins
38⚽️: Jamie Vardy
34⚽️: Danny Ings
33⚽️: Patrick Bamford
32⚽️: Ivan Toney#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/zfI6BROPlQ
— playmakerstats (@playmaker_EN) May 26, 2021
၅။ အဒမျ အမျးဈထရောငျး (ဘလကျဘနျး)
ဘလကျဘနျးအသငျးကို တနျးတကျ Play-off ကစားခှငျ့ အဆငျ့ ၆ အတှငျးဝငျအောငျ ပို့မပေးနိုငျခဲ့ပမေယျ့ အမျးဈထရောငျးရဲ့ သှငျးဂိုးက ၂၈ ဂိုးအထိ ရှိခဲ့ပွီး ဘရနျ့ဖို့ဒျရဲ့ ဂိုးသှငျးဘုရငျ အိုငျဗနျ တုနျနီနောကျ ၃ ဂိုးသာ ပွတျကနျြခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ အသကျ ၂၄ နှဈအရှယျ အင်ျဂလနျသားဟာ နယူးကာဆယျလျအကယျဒမီထှကျလညျးဖွဈပွီး ခနျြပီယံရှဈနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျတှကေ အင်ျဂလနျသားတှထေဲမှာ နှဈရာသီပေါငျး ဂိုးအမြားဆုံး သှငျးယူခဲ့လို့ သူ့ကိုလညျး ဘယျအသငျးက စငျတျောကောကျမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာကောငျးနခေဲ့ပါတယျ။
ကနျြကစားသမားတှထေဲမှာ အသငျးကွီးတှဆေီ ရောကျနိုငျသူတှကေတော့ မကျဈ အာရှနျဈ (နော့ဝဈချြ)၊ ဂိုးသှငျးဘုရငျ အိုငျဗနျ တုနျနီနဲ့ သူ့ရဲ့ ဘရနျ့ဖို့ဒျတိုကျစဈကစားဖျောတှဖွေဈကွပွီး ဖျောပွပါ ကစားသမား ၅ ဦးကတော့ အသငျးတှကေ ဆကျထိနျးဖို့ မလှယျလောကျခြိနျမှာ အာဆငျနယျ၊ ခြဲလျဆီး၊ လီဗာပူးလျနဲ့ လိဒျဈတို့ ဘာလုပျကွမလဲပဲ စောငျ့ကွညျ့ရမှာဖွဈကွောငျး ဖျောပွလိုကျရပါတယျ။
ZAWGYI: ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက အင်္ဂလန်ရဲ့ ဒုတိယအဆင့်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ ချန်ပီယံရှစ်မှာ ခြေစွမ်းပြခဲ့သူတွေကို ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းတွေက ထင်ပေါ်လို့ စင်တော်ကောက်တတ်ကြတာ အစဉ်အလာပဲဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီမှာ ဝပ်ကင်းစ်၊ ဘင်ရာမာတို့လို ကစားသမားတွေကို အခွင့်အရေး ပေးခဲ့ကြသလို ဒီရာသီမှာရော ဘယ်ကစားသမားတွေ အခွင့်အရေးရလာမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ အီမီလီယာနို ဘွင်ဒီယာ (နော့ဝစ်ခ်ျစီးတီး)
ဘွင်ဒီယာကတော့ နော့ဝစ်ခ်ျနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ တစ်ရာသီ ကစားဖူးသူဖြစ်ပြီး မနှစ်က တန်းဆင်းသွားတုန်းမှာလည်း အသင်းကြီး တချို့က ကနေရီတွေရင်ခွင်ထဲကနေ ဆွဲထုတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ ဒီရာသီမှာ ချန်ပီယံရှစ်မှာ ၃၉ ပွဲ ကစားထားပြီး ဂိုးပါဝင် အကျိုးပြုမှု ၃၁ ကြိမ်ရှိခဲ့သလို သွင်းဂိုးက ၁၅ ဂိုးနဲ့ ဖန်တီးမှု ၁၆ ကြိမ်ဆိုတာက အလယ်အလတ်အသင်းတွေအတွက် လုံလောက်ပြီး အသင်းကြီး စာရင်းဝင် အာဆင်နယ်ကပါ ခေါ်ယူလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ မိုက်ကယ် အိုလိစ် (ရက်ဒင်း)
မိုက်ကယ် အိုလိစ်ကတော့ ချန်ပီယံရှစ်ကစားသမားတွေထဲမှာ စောင့်ကြည့်အခံရဆုံးသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ အင်္ဂလိပ်လူငယ်ဟာလည်း ဘွန်ဒီယာနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ချင်း နီးစပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၇ ဂိုးသွင်းပြီး ၁၂ ဂိုး ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ဘယ်သန်ကွင်းလယ်လူဟာ အလယ်တန်းမှာ ဗဟိုရော တောင်ပံမှာပါ နေရာစုံ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ပြီး ချဲလ်ဆီးနဲ့ မန်စီးတီး အကယ်ဒမီတွေမှာ သင်ယူဖူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ သူ့ကို ချဲလ်ဆီး၊ အာဆင်နယ်၊ လီဗာပူးလ်နဲ့ လိဒ်စ်တို့က စောင့်ကြည့်နေပြီး ပြင်သစ်ကလပ် လိုင်လီကလည်း အလိုရှိနေတာပါ။
၃။ အစ္စမိုင်လာ ဆားရ် (ဝတ်ဖို့ဒ်)
ဆီနီဂေါတောင်ပံသမားဟာ ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ သူ့ရှေ့က ရစ်ချာလစ်ဆန်လို ဖြစ်လာမလားဆိုပြီး လီဂူးဝမ်းကလပ် ရင်းနေးကနေ ရောက်လာခဲ့ပေမယ့် မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်ခဲ့ဘဲ အသင်းရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ ကစားပုံမှာ တန်းဆင်းခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ ချန်ပီယံရှစ်မှာ တစ်နှစ်ကစားပြီး ပြန်လည်တန်းတက်လာချိန်မှာ မြင့်မားတဲ့ တိုက်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသခဲ့ပြီး နကျယ်ကောင်တွေရဲ့ ကလပ်စံချိန်တင် ပြောင်းရွှေ့ကြေးရှင်အနေနဲ့ လီဗာပူးလ်၊ အာဆင်နယ်နဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို အသုံးချနိုင်မလား စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ဟာရီ ဝီလ်ဆန် ( ကာဒစ်ဖ်)
လီဗာပူးလ်ကနေ ဘုန်းမောက်ကို အငှားသွားကစားပြီး ခြေစွမ်းပြခဲ့တုန်းက သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝကတော့ တစ်ဆင့်မြင့်တက်တော့မယ်လို့ လူတွေက ခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမယ့် အသင်းကြီးမှာ နေရာမရခဲ့ဘဲ လိဂ်ချန်ပီယံရှစ်ကိုပါ သွားခဲ့ရချိန်မှာ သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်းပြရာအသင်းကတော့ ဝေးလ်စ်ကလပ် ကာဒစ်ဖ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ရက်ဒင်းရဲ့ မိုက်ကယ် အိုလိစ်နောက်မှာ ဖန်တီးမှုတစ်ကြိမ်သာ နောက်ကျန်ခဲ့တဲ့ ဝေလသားဟာ သွင်းဂိုး ၇ ဂိုးမှာ ဟက်ထရစ် တစ်ကြိမ်လည်း ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ဒီရာသီမှာတော့ ဘယ်ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းလတ်ကို ရောက်မလဲ စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။
၅။ အဒမ် အမ်းစ်ထရောင်း (ဘလက်ဘန်း)
ဘလက်ဘန်းအသင်းကို တန်းတက် Play-off ကစားခွင့် အဆင့် ၆ အတွင်းဝင်အောင် ပို့မပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အမ်းစ်ထရောင်းရဲ့ သွင်းဂိုးက ၂၈ ဂိုးအထိ ရှိခဲ့ပြီး ဘရန့်ဖို့ဒ်ရဲ့ ဂိုးသွင်းဘုရင် အိုင်ဗန် တုန်နီနောက် ၃ ဂိုးသာ ပြတ်ကျန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် အင်္ဂလန်သားဟာ နယူးကာဆယ်လ်အကယ်ဒမီထွက်လည်းဖြစ်ပြီး ချန်ပီယံရှစ်နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်တွေက အင်္ဂလန်သားတွေထဲမှာ နှစ်ရာသီပေါင်း ဂိုးအများဆုံး သွင်းယူခဲ့လို့ သူ့ကိုလည်း ဘယ်အသင်းက စင်တော်ကောက်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။
ကျန်ကစားသမားတွေထဲမှာ အသင်းကြီးတွေဆီ ရောက်နိုင်သူတွေကတော့ မက်စ် အာရွန်စ် (နော့ဝစ်ခ်ျ)၊ ဂိုးသွင်းဘုရင် အိုင်ဗန် တုန်နီနဲ့ သူ့ရဲ့ ဘရန့်ဖို့ဒ်တိုက်စစ်ကစားဖော်တွေဖြစ်ကြပြီး ဖော်ပြပါ ကစားသမား ၅ ဦးကတော့ အသင်းတွေက ဆက်ထိန်းဖို့ မလွယ်လောက်ချိန်မှာ အာဆင်နယ်၊ ချဲလ်ဆီး၊ လီဗာပူးလ်နဲ့ လိဒ်စ်တို့ ဘာလုပ်ကြမလဲပဲ စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။